Dastabej » लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता जोगिएला ? आज अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता जोगिएला ? आज अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल – Dastabej
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता जोगिएला ? आज अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल
बुटवल— लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलबिरुद्ध विपक्षी गठबन्दनका ३४ सांसदको हस्ताक्षरमा गरिएको समावेदनपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते बुधबार आजै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । के हुन्छ त लुम्बिनी प्रदेश सरकार ? तर सत्तापक्षले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने कि राजीनामा गर्ने तय भएको छैन ।
घटना १) सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई पद थमौति गर्ने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । सरकारमा सहभागी भएका जसपाका सासदहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे,भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयबहादुर यादव र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेलाई जसपाले यसअघि पनि कारवाही गरेको थियो । उक्त कारवाहीविरुद्ध अदालत पुगेका थिए । अन्तरिम आदेश दिन नमानेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने दिएको छ ।
घटना २) लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ । उक्त मुद्दा मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासम पेसी तोकिएको थियो । सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले रिट निवेदन दिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै रिट निवेदनमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लिएर अदालतमा पुगको विषयमा सर्बोच्चका दुई आदेशले मुख्य मन्त्री पोखरेललको सत्ता धरमरमा परेको छ । जसपाका तीन प्रदेश सांसदलाई पार्टीले गरेको कारवाही गरेको निर्णयलाई सर्बोच्च अदालतले रोक्ने आदेश दिएको भए मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा भारी बहुमत पुग्न सक्थ्यो । त्यस्तै सोमबार परेको रिटलाई मंगलबार हेर्न नभ्याइएकोमा राखिएको छ । आज बुधबार भने प्रदेश प्रमुखले बिशेष महाधिबेशन बोलाएका छन् । एमालेकै प्रदेश सांसद बिमला खत्रीले माओबादी केन्द्रमा लागेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई थप झटका लागेको हो । आफ्नै गृह जिल्ला दांगका बिमलालाई सांसद बनाउनु मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठूला हात छ । हाल प्रदेशसभामा रहेका ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् ।
२७ श्रावण २०७८, बुधबार ०५:५९ प्रकाशित